आज माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै - नेपालबहस
आज माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
| १०:२२:४० मा प्रकाशित
२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘माओवादी केन्द्र’ को स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ । आज दिउँसो ११ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बैठक बस्‍न लागेको हो । सरकारलाई दिएको समर्थन, नयाँ सत्ता समीकरण, पार्टी सुदृढीकरणलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
मंगलबार माओवादीका अध्यक्ष पुष्‍पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग सत्ता समिकरणबारे छलफल गरेका थिए ।
देउवा र भट्टराईसँग भएका छलफलबारे पनि दाहालले बैठकमा जानकारी गराउने माओवादीका एक नेताले बताए । मंगलबार पनि माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो ।
जापानद्वारा फाइजरलाई थप खोप आपूर्तिको लागि आग्रह भर्खरै
सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको भूमिका थप स्पष्ट गरिने १० मिनेट पहिले
दिनदिनै महामारी फैलिदैछ तर सावधानी छैन, जोखिम उच्च ! २४ मिनेट पहिले
गृहमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति पाएका बादलले लिए शपथ ३४ मिनेट पहिले
संक्रमण बढेसँगै यतीकाे स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई ३७ मिनेट पहिले
नेप्से आज दोहोरो अङ्कले ओरालो ४२ मिनेट पहिले
त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज : नेदरल्याण्डस्द्वारा मलेशिया पराजित ४८ मिनेट पहिले
जोन्सन एन्ड जोन्सनको कोभिड खोपमा रगत जम्ने खतरा ४ दिन पहिले
नायिका प्रियंका र ऋचापछि आमा बन्दै गरिमा ४ दिन पहिले
साहित्यकार शर्मा अभिनन्दित २ हप्ता पहिले
विद्यार्थीकाे कुनै क्षति नहुने गरी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गर्दै त्रिवि ४ हप्ता पहिले
‘कबड्डी ४’मा देखिदै मिरुना र गौमाया २ हप्ता पहिले
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि किशोर प्रधानद्धारा उम्मेदवारी घोषणा ५ महिना पहिले
सङ्घीय सांसद बस्नेतबाट कुण्ड उद्घाटन ८ महिना पहिले
कृषकले सेञ्चुरी बैंकबाट सहुलियत कर्जा पाउने २ महिना पहिले
आज हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना ९ महिना पहिले